थाहा खबर: सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कुन पार्टीबाट को कसको दाबी?
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा कुन पार्टीबाट को कसको दाबी?
सुर्खेत : बैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा प्रदेश नम्बर ६ को सम्भावित राजधानीको रुपमा रहेको सुर्खेतका राजनितिक दलहरु पनि चुनावको तिब्र तयारीमा लागेका छन्।
सुर्खेतमा ५ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका भए पनि सबैभन्दा पुरानो नगरपालिका वीरेन्द्रनगरलाई केन्द्रित गरी राजनीतिक दलहरुले गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्।
सुर्खेतका सबै स्थानीय तहमा निर्वाचनको तयारी, कमिटी विस्तार तीव्र रुपमा चले पनि उम्मेदवारको चर्चा भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा नै बढी छ। स्थानीय तहको प्रमुख तथा उपप्रमुख मध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य भनिए पनि सुर्खेतका राजनीतिक दलहरुको अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा महिलाहरु दोस्रो पदमै खुम्चिने सम्भावना प्रवल देखिन्छ।
शक्तिशाली उम्मेदवारको खोजीमा कांग्रेस
२०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सुर्खेतका ३ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा विजय हासिल गरेको कांग्रेस स्थानीय तहमा पनि आफ्नो वर्चस्व कायम गर्ने होडमा छ। वीरेन्द्रनगरको नगर प्रमुखका लागि कांग्रेसका नगर सभापति देवकुमार सुवेदी र जिल्ला सभापति कमलराज रेग्मीको चर्चा छ। पूर्व कोषाध्यक्ष गोविन्द कोइराला र नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय कोषाध्यक्ष जानकी सिंहले पनि नगर प्रमुखमा दावी गरेका छन्।
वीरेन्द्रनगरको नगर प्रमुखमा सबैभन्दा चर्चामा रहेका सुवेदी हुन् भने सिंहले पार्टीले आफूलाई अगाडि सार्ने लगभग पक्का भइसकेको दाबी गरेकी छन्। सुर्खेतमा कांग्रेसका पूर्णबहादुर खड्का र हृदयराम थानीका दुई गुट छन्। त्यसैले उम्मेदवार छनोटमा भागवण्डा मिलाउनुपर्ने छ। कांग्रेसका जिल्ला सभापति कमलराज रेग्मी दुबै पक्षका विश्वासिला पात्रका रुपमा रहेकाले उनी नगर प्रमुखको उम्मेदवार बन्ने बढी सम्भावना भएको कांग्रेस वृत्तमा चर्चा छ।
आंकाक्षीले भरिएको एमाले
नेकपा एमालेले यसअघिको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा नगरपालिका, जिविस तथा अधिकांश गाविसमा एकलौटी जित हासिल गरेको थियो। एमालेबाट नगर प्रमुखमा जिल्ला उपाध्यक्ष अमृत बीसी, युवा नेता कुलमणि देवकोटा, हरिहरनाथ योगी, वीरेन्द्रनगरका पूर्व मेयर बालाराम शर्मा, निलकण्ठ खनाल, अखिल नेपाल महिला संघ सुर्खेतका अध्यक्ष मोहनमाया ढकाल आकांक्षी देखिएका छन्। यी मध्ये पूर्व नगर प्रमुख बालाराम शर्माको सम्भावना बढी छ।
चुनावी प्रचारप्रसारमा माओवादी केन्द्र
नेकपा माओवादी केन्द्रले भने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ। नगर प्रमुखमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक समिति सदस्य रत्नबहादुर गाहा र उपप्रमुखमा अखिल नेपाल महिला संघ प्रदेश नम्बर ६ का संयोजक हरिमाया शर्मालाई अगाडि सारेको छ। उम्मेदवार घोषणासंगै माओवादी केन्द्र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सबै वडाहरुमा चुनावी प्रचारप्रसारमा लागि सकेको छ।
स्वतन्त्र उम्मेदवार दाहाल
नेपाली कांग्रेस पार्टीले आफूलाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको मेयर पदमा उठाउने संकेत नदेखाएपछि सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका गेहेन्द्रप्रसाद दाहालले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिँदैछन्। दाहालको स्वतन्त्र उम्मेदवारीले नेपाली कांग्रेसलाई समस्या पार्ने आँकलन गरिएको छ।